City oo markaan ay waajib tahay soo qaadashada Sanchez’ Halkaan arin ayaa waajibinaysa - Jazeera FM
City oo markaan ay waajib tahay soo qaadashada Sanchez’ Halkaan arin ayaa waajibinaysa
January 1, 2018 admin featured
Pep Guardiola ayaa rajo ka qaba in Kooxdiisa ay lasoo wareegto Weeriryahanka Kooxda Arsenal Super Alexis Sanchez, ka hor bisha January.
Hogaamiyayaasha Horyaalka ee Sky Blue ayaa ka warqaba xaalada dhaawac ee Cayaariyahan Gabriel Jesus, kaas oo la xaqiijiyay in ugu yaraan uu mudo bil ah garoomada ka maqnaan doono.
Kooxda Manchester City ayaa la rumaysan yahay in ay ku guuldaraysatay saxiixa Cayaariyahan Alexis Sanchez bilowgii ololahaan, markaas oo lacag dhan £60m laga soo diiday, balse Janaayo diyaar u ah in ay soo qaadato adeegiisa, sida laga soo xigtay Sky Sports.
Pep Guardiola ayaa kulan la qaadan doona Maamulka Kooxda Gunners, si looga iibiyo Sanchez oo Kooxdiisa u dhaliyay 80-gool, kaddib 150-kulan uu kasoo muuqday Kooxda Waqoyiga magaalada London kasoo jeeda ee Arsenal oo bedelkiisa doonaysa Cayaariyahanka reer Faransa iyo AS Monaco Thomas Lemar.
Si kastaba ha ahaatee Kooxda Pep Guardiola ayaa qasaaro xoogan kala kulmay dheeshii shalay ay la qaateen Kooxda Crystal Palace taasoo ka dhaawacday Xiddigaheeda kala ah Gabriel Jesus and Kevin De Bruyne, iyadoo sidoo kale ka jibisay Rokoorrkeeda xaga guulaha xiriirka ee England.
The post City oo markaan ay waajib tahay soo qaadashada Sanchez’ Halkaan arin ayaa waajibinaysa appeared first on Goolasha.net.
← Report: Bayern Munich oo isaga hartay Jurgen Klopp
Burnley vs Liverpool, Salah, Coutinho iyo Lallana oo kuso bilowday →